Ugqirha uGeorgy Dronov, i-biography
Inkwenkwezi yee-series "I-Voronin" uGeorge Dronov uxela ngobuntwaneni bakhe, indlela yokuswela ukungabikho komsebenzi kunye nokuphendula kwakhe egameni likaSasha. Ugqirha uGeorgy Dronov, onobomi bakhe obuhle kakhulu, amaphupha omsebenzi ophumeleleyo kunye nekamva elivuyisayo.
Bathi awunaso ixesha lokutya rhoqo kwi-set of show.
Siyancitshiswa ukuba sidle izidlo ezimbini ezimbi. Lihlekisa. Enyanisweni, ngamanye amaxesha kukho ixesha lokuphumla kwesidlo sasemini, kodwa usuke ukhathele kangangokuba kufuneka ukhethe oko ungayisebenzisa: ngesidlo sasemini okanye ukulala. Kwenzeka ukuba iyure enye unokuphumla kwaye unokusebenza ngakumbi. Kwaye emva kweekhefu ezilandelayo-kunye ne-snack.
Ewe, usetyenziswe ukwenza umsebenzi we-serial? Okanye ufuna ukutshintshela kwifilimu epheleleyo, isiqhelo esahlukileyo ngokupheleleyo?
"Kwiimitha ezipheleleyo" ngoku ungabizi. Siza kubona okwenzekayo ngokuzayo, nangona emva kwesikhombiso-com "uSasha + Masha" engamenywanga ... Kodwa mayeke abaqondisi abangabibizi, bayingxaki yabo, kungekhona yam. Ngoko, ke, kuya kuba nento eyahlukileyo.
Kakade iKostik. Kodwa "uSasha + Masha" usabonakaliswa kwiTV, kwaye ukuba ngaphambili ndandiyekile, ngoku ndiyaziqhayisa. Enyanisweni, ngaphandle kwekhredithi-com, akukho mveliso efanayo efanayo kwi-TV yaseRashiya eya kuba yikho ukususela ekuqaleni kwayo.
Ngokuqhelekileyo, ukuba sithetha ngegama langempela-uGeorge, uEgor, uZhora, uGoga. NguGosha. Ngaba uyayithanda kakhulu?
Ngokusemthethweni - uGeorge, kwaye ndiyithande elo gama. Kwaye ekhaya okanye kwiimeko eziphantsi kwengcinezelo - Egor. Akukho Zhora okanye uGosha. Ewe, uGosha Kutsenko akayi kukhutshwa. Ngokwenene uYura.
Xa ucinga malunga nobuntwana bakho, yintoni efika kuqala entloko yakho?
Oo, indlu. Ndimkhumbula ngokukhawuleza yena kunye nogogo kunye nogogo-makhulu. Omnye umhlobo wobuntwana uVanya Kolchenko nodadewabo uDasha. I-Pines, indlu endala, isanti, isanti.
Ngaba uchithe ixesha elide apho?
Ewe, ndathathwa apho kulo lonke ihlobo. Ezi yizikhumbuzo ezicacileyo. Kwakuhle kakhulu apho. Ngokuqhelekileyo ndingumntu onelanga, andithandi ubusika kwaye ndiyothuka kakhulu ngelilanga. Mhlawumbi ngenxa yokuba mna u-Aries ngumqondiso wesibindi somlilo. Ndiyathanda amanzi kuphela kwisikhulu esikhulu: ulwandle, ulwandle, uhlambe, uhlambe ...
Abantu bahlulwe phakathi kwabo bathanda isikolo, kwaye baye bayayithiya. Yintoni onokuyiqonda?
Andizange ndiyithande. Ngokuqhelekileyo, ukunyaniseka, ukukhula kwasekuqaleni kwakunzima kum. Wafunda kakuhle, akazange akhuphe ngokungathandabuzeki, wakhulela njengomntwana wendlu, ehlambulukileyo - nangona ngenye indlela unyana wamama. Andikwazi ukuma i-kindergarten, kwaye le mvakalelo yaguqulwa yaba yinqaba yesikolo. Andizange ndikhululeke kwiqela. Nangona ndiyintlalontle, kodwa ngaphantsi kokukhuselwa kwephiko lomzali ndihlala ndiziva ndingcono. Kwiinkampu ezahlukeneyo zezemidlalo, ndandibuhlungu kakhulu ngaphandle kokuba umama nonina. Ngoko ke, ngexesha lokubunjwa kobuntu, ndineengxaki. Abafana kwinkqubo yokukhula baqala ukuzabalazela ubunkokheli, ukuphuhlisa iimpawu ezithile, ezikuhlalutya kokugqibela, zibe ngabantu. Ngokuqinisekileyo, ndaphinda ndiqhubise intsha-yintsholongwane - nabani na unobungozi obude xa eqala ukulwa, uguqa ngokugqithiseleyo, uthanda ukubethelela iinqonga zamatye ...
Masibuyele kwingxoxo malunga nomsebenzi womdlali wegosa uGeorgy Dronov, owaziwa ngaye bonke abalandeli bakhe. Kuyaziwa ukuba ukuba ngabadlali abenza indima yeJuliet liphupha. Ngaba ungatsho into efanayo malunga nabadlali besilisa kunye nendima ye-Romeo, oye wadlala kuyo kwi-Theatre eMzantsi-ntshona?
Kakade. Ndimele ndithi loo mi sebenzi inxulumene nobudala. Kwaye ndakwazi ukudlala iRoomo eneminyaka eyi-27. Enyanisweni, kule ntsebenzo watshintsha umdlali ongudala. Kodwa ndinombulelo kumlawuli weqonga, uValery Belyakovych, ngokundinika ithuba lokwenza. Ndiyathetha ukuba nangona ngoku ndinendima yokuphupha, naloo nyaka. NguKhlestakov. Ndicinga ukuba ndiyifom efanelekileyo yale fomu yengqondo. Kodwa encinci ngakumbi - kwaye iya kuba iphuzile kakhulu. Ngoko, ukuba umntu undibone, ndiya kuvuya. Ngaphezu koko, ndiyamthanda uGogol kakhulu.
Unenkwenkwezi kuNikita Mikhalkov kwi-episodedic role in "Burnt by Sun," kwaye emva kwe "bhabheri yaseSiberia" kufuneka ube nethuba lokukhetha.
Oku akuzange kwenzeke. Ngokuchanekileyo, kukho enye inzame. Emva kokuba i-Barber, ndikhawuleza ndifumene isibonelelo sokuthatha inxaxheba ekukhutsheni, kodwa ndiziphatha ngokuzenzekelayo ngokungahambi kakuhle ngoko. Ngokuqhelekileyo, ndiyakholelwa ukuba ebomini bam kukho iingxaki ezimbini apho ndenze izinto ezithatyathwe yimi, imigaqo yabantu, kwaye ngaphandle kwabo babonwa ngokungafaniyo. Omnye unxulumene nobusela. Ndamtyholwa ukuba ndibiwe, kodwa andizange ndenze. Okwesibini kukukhetha nje indima. Ndiyifunde umbhalo kwaye ndaqonda ukuba indima yomlingani ophakanyisiwe kum kuninzi kakhulu.
Kwaye wacinga ukuba umlawuli unikezela wonke umntu ukuba aqonde indlela umdlali oyilungu ekubhekiselele ngayo kwizinto eziphathekayo. Ndacinga ukuba inxaxheba ephambili iya kundiphatha ngakumbi. Kwaye nodliwano-ndlebe nomlawuli wathi into endipha yona ijoliswe kumntu omdala. Ngaphezu koko, ndade ndiyazi umdlali onokuyinyamekela ngokufanelekileyo. Emva koko umlawuli wabuza: "Yaye uya kuthi, yintoni inxaxheba oyifunayo?" Ndaphendula: "Into ephambili." Emva koko le nto iyimfuneko kwaye ndivumeleke. Kwaye kutheni ukuthula? Simele sikhulume ngokungathethekiyo kumlawuli. Kodwa mhlawumbi wayithatha njengenkwenkwezi yeenkwenkwezi, i-fanfare.
Ngaba unokuba ngumvelisi?
Hayi, ayikho. Abantu abaninzi baphumelela ngempumelelo nayiphi na indlela, bahamba ngeentloko zabo. Kwaye mna umgaqo "zonke iindlela zilungile" azimkelekanga. Ndagqiba kwelokuba ndiza kwenza ngendlela eyahlukileyo: yonke imisebenzi yenziwe ukuba ibe ngumgcini wemigangatho yemigangatho. Uyabona, ukuba senze umzobo ombi weSasha + Masha, ngoko awuyi kuboniswa nanamhla. Abantu badla ngokuthi kum: "Ngaba awukhatywanga xa ubizwa ngokuthi nguSasha?" Kwaye umsebenzi ondikhokelela njani kubadlali abengaziwayo kwizinga loomsebenzi weendaba usenokubhukuda?
Kwakukho ixesha xa uyeka ukwenza kwaye ushiye ukusebenza kumthengisi wemoto ...
Kunjalo. Emva koko ndashiya iTheatre eMzantsi-ntshona. Kwaye umhlobo wam, umnini-mthengisi wemoto, wathi: "Uya kuhlala phi ngaphandle komsebenzi? Hamba ngoku kum. " Ndaya. Imali kwafuneka izuzwe ngandlela-thile.
Luhlobo luni lweemvakalelo umntu aziva ngayo, ngubani owayesesiteji izolo, kwaye ngoku uthengisa imoto?
Ewe, yintoni iimvakalelo zikaBrad Pitt, xa evakalisa isidlo sesidlo kwintsimbi yenkukhu ekuqaleni komsebenzi wakhe?
Yonke into incike ekubeni nethemba. Emva koko, umntu uya kucinga: uqeqesho oluhle, oluzinzile, kutheni ndifuna le movie?
Yileyo ndlela inani elikhulu labantu abavela emsebenzini wethu kwaye liye. Kwaye mna, ndaziva ngaphakathi. Inyaniso kukuba usebenzo lobambiswano luhambelana neemvakalelo. Ngokukhawuleza xa ukuphuma kwabo kuvaliwe, baqala ukugquma ngaphakathi. Ngenxa yoko - ewe, kukho ukungaphumeleli. Kodwa, ukuba uyazi ukuzilawula, yonke into iya kuba lula. Ndaza ndazi ngokuqinisekileyo ukuba eli xesha lobomi bam lisesigxina. Kwakungekho ncamango yokuphelelwa lithemba-apho, bathi, ndangena kwisiganeko kwaye ngoku andiyi kuphuma kuwo.
Uhlobo luni lobomi?
Ndiziphatha ngokuvumelana nomoya wam. Ngamanye amaxesha ndifuna ukulala kunye nephephandaba phambi kweTV, nangona ndingumfana omncinci, obizwa ngokuba, phantsi.
Ngokuqhelekileyo, ngoku ndaqala ukuqonda ukuba akudingeki ukuba ugqibe ingqalelo kwimeko ethile yokukhathala. Emva koko, yindlela ubomi obuya kuhamba ngayo. Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba, ngokusasaza iprojekthi ye-Voronin, ndenza izicwangciso zonyaka ozayo. Oko kukuthi, kwiingcamango zam kulo nyaka sele sele uhleli, kodwa sele iqalile. Kodwa i-monotony ayifanele ibe yinto, ngoko ndizama ukwenza uninzi lwexesha lokukhulula lokuhamba, imidlalo ...
U-Ani Lorak wakhulula omnye "uShady Lady"
Inkwenkwezi edumile yeTV u-Oksana Marchenko
Biography uMireille Mathieu
Umzekelo wezeMpilo weCarol Alt
Ubomi kunye nobomi bomntu kaVyacheslav Tikhonov
Iyintoni i-croupa kinoa kunye nento edlayo: iresiphi yangempela yesaladi enomdla kunye nempilo evela kumculi waseValeria
Indlela yokuqokelela imifuno
Iifomfini zekhofi kunye ne-caramel kunye ne-crushed cup
Indlela yokufundisa umntwana ukuba abhale iincwadana
Indlela yokujongana nokudandatheka kwekwindla - iresiphi ekhethekileyo esuka eKsenia Sobchak
Ukutyelela ibali lefayile: Yintoni eyenzekayo ebusweni bukaTatiana Vedeneeva (isithombe phambi nangemva kweeplastiki)
I-cranberry sauce nge-cherry